जाडोमा बेथेको सागका फाइदा जान्नुहोस् -
[ April 18, 2021 ] हरियो सलाद सुपरमार्केटमा किने, घर ल्याएर हेर्दा प्याकेटवाट नि’स्कियो सर्प समाचार
[ April 18, 2021 ] तु हे’र्नुहोस्, चियावली लाई कडा सुरक्षामा राखेको छु भन्दै आए गजेन्द्र लिम्बु मिडियामा समाचार
[ April 18, 2021 ] छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलको झ’गडा चर्किंदो, शिल्पाको चे’तावनी (भिडियो हे’र्नुहोस) समाचार
[ April 18, 2021 ] दाई भन्दै घरमै आउने छोरीकी आमालाई श्रीमानले लिएर हिँडेपछि, श्रीमती मु ‘र्छा (भिडियो हे’र्नुहोस) समाचार
[ April 18, 2021 ] धनकुटामा मोवाइल चार्ज गर्ने क्रममा, करेन्ट लागेर एक जनाको मृ’त्यु १५ जना घा’इते समाचार
Homeसमाचारजाडोमा बेथेको सागका फाइदा जान्नुहोस्
जाडोमा बेथेको सागका फाइदा जान्नुहोस्
January 9, 2021 admin समाचार 2572
बेथेको साग स्वा’दका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो प्रायको भान्सामा पाक्ने त’रकारी हो। बेथे दुई किसिमका हुन्छ, एक सा’मान्य हरियो पात भएको र अर्कौ रातो पात भएको । यसको प्रयोगले वि’भिन्न रोबाट मुक्ति मिल्ने गर्दछ ।
मिर्गौलाको पत्थरी नि’काल्नका लागि बेथेको साग उपयोगी मानिन्छ । यसका लागि आधा किलो बेथेको साग उमा’लेर छान्नुपर्छ र त्यसमा मरिच, जीरा र हल्का रुपमा सिधे नुन मिसाएर दिनमा चारपटक पिउने गर्नुपर्छ तर मृगौलाको पत्थ’रीका बिरामीका लागि यो अमृत नै मानिन्छ ।
बेथेको साग थुप्रै औ’षधीय गुणले भरिपूर्ण हुन्छ । बेथेमा खनिज तत्त्वको मात्रा अमलामा भन्दा बढी हुन्छ । बेथेले शरीरमा फलामको कमी हुन दिंदैदैन । यसले आ_माशयलाई बलियो बनाउँछ । बेथेमा फलाम, फस्फोरस, भिटामिन डी र क्षार धेरै मात्रामा पाइन्छ । यो शुक्रवर्धक र कब्जियत भगाउन लाभकारी मानिन्छ । कलेजो’सम्बन्धी रोग, अजीर्ण, ग्यास, जुका, पत्थरी, पेट घोच्ने समस्या’लगायतबाट मुक्ति मिल्छ ।
भोक नलाग्ने, खाना ढिलो पच्ने, डकार, पेट फु’ल्नेजस्ता समस्या हटाउन पनि बेथे लाभदा’यक हुन्छ । पिसाब, मूत्राशय, मृगौलासम्बन्धी रोग निको पार्न र छालासम्बन्धी रोगमा समेत यसको उपयोग प्रभावकारी मानिएको छ । बेथेको तरकारी नि’यमित सेवन गरेमा वाथ ( यूरिक एसिड), रक्त र त्वचा विकार टाढा हुन्छ । बेथेको सबैभन्दा ठूलो गुण भनेको शरीरमा भएक सबै प्रकारका वि’षहरुको निवारण गर्नु हो । यसकारण यसलाई वि’षनिदान नाम दिइएको छ ।
बेथेमा का’र्बोहाइड्रेट, प्रोटिन, क्याल्सियम र भिटामिन ए, मिनिरल्स र आइरन प्रचुर मात्रामा पाइन्छ । यसमा सोना धातु पनि पाइन्छ जो कुनै अन्य साग’सब्जीमा पाइँदैन । औषधिका रुपमा बेथेका पं’चागं अर्थात पाँच अंग (जरा, डाठ, पात, फल र फूल)लाई प्रयोग गरिन्छ ।
आयुर्वेदमा गरिएको एक अनु’सन्धानले बेथेको साग नियमित खानाले स्तन क्यान्सरको सम्भा’वना कम हुने देखाएको छ । यसमा उपलब्ध सेलिनियम, ओमेगा-३ र ६ फैटी एसिड स्तन क्यान्सररोधक हुन्छन् । बेथेको १० ग्राम दानालाई करिव दुई मि’लीलीटर पानीमा उमाल्नुहोस् । ५० मिलीलीटर रहुन्जेल उमालेपछि ता’ततातै पिउँनुहोस् । यस्तो एक महिना’सम्म विहान-बेलुका पिउनुहोस्, जोर्नी दुखाईबाट तपाईलाई राहत मिल्छ ।
जहिलेसम्म बे’थेको सब्जी मिल्छ, खाने गर्नुहोस् । बेथेलाई पानीमा उमालेर पिउनुहोस् । यसले पेटका हरेक प्र’कारका रोगलाई पनि ठिक गर्छ ।– बेथेले पेटलाई ताकत दिन्छ र कब्जियत हुन दिँदैन । यसले पेट’लाई सफा गर्छ । दुई चम्चा बेथेको दाना एक गिलास पानीमा उमाल्नुहोस् । पानी आधा सु’केपछि छानेर पिउँनाले रोकिएको महिनावारी खुल्छ ।
एक गिलास काँचो बेथेको रसमा स’ख्खर मिसाएर दैनिक पिउने गर्नुहोस्, पथ्थरी गालेर झार्छ । बेथेलाई उमालेर नि’चोरेर रस पिउनाले र सागलाई सब्जी बनाएर खानुहोस् । २ कप बेथेको पात पिसेर बनाएको रसमा आधा कप तेल मि’साएर हल्का तताउनुहोस् ।
जब पानी सुकेर तेल’मात्र रहन्छ, त्यसलाई छानेर एक सफा सिसाको बट्टामा राख्नुहोस् । त्यसलाई छा’लामा दैनिक लगाउने गर्नुहोस् । लामो समय ल’गाइराख्ने गर्नु भएमा छालाका दाग, दाथ, चि’लाउने, कुष्ठरोग आदि रोग टाढा भाग्छ । – खबर हबबाट
अर्जुन रामपाल विवाह नगरी बने बाबु, जेठी छोडेर चौध वर्ष कान्छी मोडलसँग…
यस्ता छन् कंगारुसँग जोडिएका अनौठा रहस्य जान्नुहोस्
December 6, 2020 admin समाचार 2670
श्रीमतीले धो’का दिएपछि शिशिर भण्डारीको यस्तो अवस्था, फोटो फिरिममा- २ को भिडियो आयो हे’र्नुहोस्
April 15, 2021 admin समाचार 621
पछिल्लो स’मयमा निकै नै चर्चित गायिका रचना रिमाल को आवाज मा रहेको फोटो फिरिममा २ ” रुमाल चिनो छ ” गीत सा’र्बजनिक भएको छ। उक्त गीत नयाँ नयाँ न्युज नेपाल युटुब च्यानल मार्फत उक्त गीत
February 20, 2021 admin समाचार 1729
२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको वि’नाशकारी भूकम्पले निम्त्या’एको मानव क्षति र भौतिक संर’चनाहरुको बिनाशले कयौ नेपालीहरुलाई घरबार बिहिन बना’एको थियो भने कतिलाई आफन्तबाट बिछोड ब’नाएको थियो । नेपाल सरकारले प्रा’धिकरण नै गठन गरि बैदेशिक
छवि ओझा र शिल्पा पोखरेलको झ’गडा चर्किंदो, शिल्पाको चे’तावनी (भिडियो हे’र्नुहोस)
दाई भन्दै घरमै आउने छोरीकी आमालाई श्रीमानले लिएर हिँडेपछि, श्रीमती मु ‘र्छा (भिडियो हे’र्नुहोस)
धनकुटामा मोवाइल चार्ज गर्ने क्रममा, करेन्ट लागेर एक जनाको मृ’त्यु १५ जना घा’इते
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (165418)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (159940)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (159444)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (158894)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (158478)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (156464)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (156340)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (154672)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (150045)
श्रीमान विदेशमा दिनरात दुःख गर्दै, यता श्रीमती आफ्नै श्रीमानको साथीसंग भागेपछि, सबैलाई रुवाउने कथा (145167)